Ndị na-emepụta ihe na ndị na-eweta China China elele eletrik eletrik IGBO
1.Flame retardant, dị mfe ịwụnye
5. Usoro nchịkwa ego kaadị kaadị IC
1.Ngosiputa ihe ngosi LCD nwere nkuku nlere anya na odi iche di elu
Njikwa ego kaadị 2.IC
4.High-nkenke, anya-elu, nkwukwu di elu, oke-obosara, ike pere mpe mpekere.
5.High-kwụsie ike, akwa manganese-ọla kọpa shunt nwere akaghị dị ugbu a
6. Ebe a na-etinye arịrịọ: obodo, họtel, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ọfịs, ụlọ akwụkwọ, ihe onwunwe, wdg
7.The akụkụ nke ikpe ahụ bụ edo, mara mma ma dị mfe ịwụnye.
8. Jiri kaadị CPU / SD kaadị
9. Ozi omumu: ikike onodu oku nke onwa ugbua na onwa gara aga, uru ngosiputa eletrik nke igwe eletrik na ngụkọta ngụkọ ike elele, ụbọchị na oge ugbu a, koodu mkpu ma ọ bụ oge, oge nkwukọrịta, ọnụ ọgụgụ nkwukọrịta, ọnụ ọgụgụ mita nke ike eletrik. wdg
10.Main ọrụ: njiri nyocha nchekwa achọrọ, ọrụ ndekọ ihe omume, Ọdịdị siri ike, ịrụ ọrụ akara dị mma
11.Communication usoro: RS485, infrared,
12.Sọrọ nhọrọ emegharịrị maka njikwa ibu. Uru: nhazi dị mfe na ọnụahịa dị ọnụ ala.
Nkọwapụta ugbu a 5(20)5(60） 、10（40),15(60)A
Izi ezi Level 1
Ike oriri Ahịrị voltaji: <= 1.5W, 10VA; ahịrị ugbu a: <1VA
Oke iru mmiri 40%~60%, a na-achịkwa iru mmiri dị n'etiti 95%
Nke gara aga: Single frasi ume mita （n'ime obodo + modul）
Osote: 3Phaetịchara ike elele (kaadi ic)
Single Ala eletriki Energy Mita
mita otu ume
Single Ala Static Energy Mita
Single frasi Static Kwh Mita
Single-Phase Ike Mita